flash song ပြုလုပ်နည်း အခြေခံ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
flash song ပြုလုပ်နည်း အခြေခံ
တည်နေရာ: hellboy's page
ပို့စ် 106 ခုအတွက် 929 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ သိပြီးသားသူတွေများမှာပါ.. အဲဒါကြောင့် မသိသေးသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်.. သိပြီးသားအကိုအမသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လိုအပ်တာများ ရှိရင် ၀င်ရောက်အကြံပေးဆွေးနွေး ဝေဖန်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်.. ကျနော်တို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့နေကျ နားထောင်နေကျဖြစ်တဲ့ flash song လေးများလုပ်ပုံတွေကို အခြေခံလေးတွေ ပြောပြသွားမှာပါ.. အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်.. လုံးဝမသိသေးသူများ လုပ်တတ်သွားအောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျာ.
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ကျနော်တို့တွေ flash song တွေစလုပ်မယ်ဆိုရင် လိုအပ်မယ့် ဆော့ဝဲလ်တွေကို အောက်မှာ ရယူပါ. အဲဒါတွေကတော့ ကျနော် ဖိုရမ်မှ မtu tu ဆီကနေတောင်းယူထားတာပါ.. အစ်မကိုလည်း ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
1.. Mp3 Resizer
2.. swish max 3
အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲတွေ ရယူပြီးပြီဆိုရင်.. လိုအပ်မယ့် စာအုပ်တွေကို အောက်မှာယူပါ..
၁.. swish max3 crack နည်း
၂.. mouse effect ထည့်နည်း
mp3 resizer လေးက ဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့တွေ သီချင်းတွေထည့်တဲ့ အခါကျရင် သီချင်းဖိုင်ဆိုဒ် ကများနေလို့ မကောင်းပါဘူး .. ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာတို့ ဘာတို့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့သီချင်းပွင့်ဖို့ အကြာကြီးစောင့်ရမှာပါ.. အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ သီချင်းကို ဖိုင်ဆိုဒ်နည်းနည်းနဲ့ ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရခြင်းပါ.. အဲဒါလေး အသုံးပြုပုံကတော့လွယ်ပါတယ်.. ကိုယ်ဖိုင်ဆိုဒ်လျှော့ချင်တဲ့ သီချင်းကိုရွေးပြီး resize ဆိုတာကို ရွေးပေးရုံပါပဲ.. တစ်ခုပါပဲ သီချင်း file name က မြန်မာလိုဖြစ်လို့မရပါဘူး.. အဲဒါဆိုရင်တော့ ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး.. တတ်နိုင်သမျှ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်ချုံ့ပေးပါ.. ပြီးရင်အဲဒီမှာပါတဲ့ preview ဆိုတာလေးနဲ့ နားထောင်ကြည့်ပါ.. အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်ချုံ့လိုက်တဲ့ အသံဖိုင် ကောင်းမကောင်းစစ်ကြည့်လို့ရပါပြီ..
ပြီးတော့ crack လုပ်နည်းစာအုပ်.. အဲဒါကတော့ ကျနော် mmflash song က ကိုထွန်းထွန်းဆီကနေ တောင်းယူထားတာပါ.. အဲဒါကတော့ swish max3 ကို ကျနော်တို့ trial version မဖြစ်အောင် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပေါ့.. ကိုထွန်းထွန်းကိုလည်း ဒီနေရာကနေပဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်..
နောက်တစ်ခုကတော့ mouse effect ထည့်နည်းပါ.. အဲဒါလည်း ကိုထွန်းထွန်းဆီကပါပဲ.. ကျနော်အောက်မှာလည်း ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ရှင်းပြသွားမှာပါ..
ဟုတ်ကဲ့ .. အဲဒါတွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ flash song များကို စတင်ပြုလုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ.. ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကိုတော့ ကျနော် ဗီဒီယိုဖိုင်လေး လုပ်ထားပါတယ်.. အခြေခံပေါ့..
ဒီဖိုင်လေးကတော့ စစချင်းလုပ်ရမယ့် အချက်တွေလောက်ပဲ ပြောပြထားပါတယ်.. နောက်တစ်ခန်းကျမှ .. ကျနော်တို့ preview ကြည့်ပုံတွေ mouse effect တွေထည့်ပုံတွေကို တစ်ခါပြောပေးပါ့မယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်များသွားရင် တင်လို့ မရမှာစိုးလို့ပါ..
ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲမှာမှ နားမလည်တာများမရှင်းတာများရှိရင် ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်သလို.. လိုအပ်တာများ ရှိရင် ဖြည့်စွက်ပြောကြားပေးကြပါလို့.. ပြောကြားရင်း...
အောက်ပါအသင်းဝင် 40 ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, ခွန်ညီး, ငါးကြော်, ဆန်းမောင်, မှတ်ပုံတင်ရန်, ယုယု, ယွန်းယွန်း, သက်တန့်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, ရွှေနေလ, ဖြိုးဇေ, မြင့်မိုရ်, ၀င့်လေး, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, amaung344, arkaraung, athaylay1, bonge, Emc Arkar, g00gle, Hla Myo Thein, ko lin, kokomaung.ko28, kyaukphyu, kyawkyi123, KznT, Mandalarthar, moe z, nanda, openeyes, pannuko, Phoekwarlay, phoetharlay, scorpion77, thetzin, tu tu
ပြန်စာ - flash song ပြုလုပ်နည်း အခြေခံ
ကျေးဇူးပါတယ်..ကို hellboy ရေ....
ကျွန်တော်က လုပ်ပြီးသား ဖလက်ရ်ှဖိုင်လေးကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်တင်ချင်ပါတယ်... အဲဒီ ဝဘ်လေးပြောပြပေးပါနော်...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ခွန်ညီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by ခွန်ညီး
www.swfcabin.com မှာတင်လို့ရပါတယ် Vote ပေးလို့ရအောင်လဲ လုပ်ထားပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ဇာနည်မောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, မှတ်ပုံတင်ရန်, ယွန်းယွန်း, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, arkaraung, hellboy, sky4ster, tu tu
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုခွန်ညီးရေ .. ကျနော်တင်နေကျကတော့ တစ်ဆိုက်တည်းပါ.. ဒါပေမယ့် မနေ့ကမှ နောက်တစ်ဆိုက်ထပ် ထွက်လာတယ်.. အဓိကကတော့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ.. ကျနော်တင်နေကျဆိုက်ကလင့်ကို မြန်မာ ပြည် ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို ပို့တော့ တစ်ယောက်ကရတယ် နောက်တစ်ယောက်က မရဘူး .. အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်မျိုးကြံတော့ .. တစ်နေ့က စကားဝိုင်းလေးမှာ ကိုသက်တန့် တင်သွားတဲ့ ဆိုက်လေးကို သတိရလို့ အဲဒါလေးနဲ့ စမ်းကြည့်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ် အဲဒီတော့ နှစ်နည်းပေါ့ .. အခု ကိုဇာနည်မောင် ပြောတဲ့ နည်းနဲ့ဆို သုံးနည်းပေါ့.. အဲဒီဆိုက်သုံးဆိုက်ရဲ့ ကွာခြားချက်လေးတွေကို သိရအောင် ကျနော်အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ကျနော်တင်နေကျဆိုက်ကတော့ mmflash song ပါ..
၁.. မင်းတစ်ယောက်သာ mmflash song
၂.. မင်းတစ်ယောက်သာ megaswf
၃.. မင်းတစ်ယောက်သာ swfcabin
ကျနော်တင်တဲ့ ဆိုက်မှာ တင်ပုံတင်နည်းလေးကိုတော့ ဒီလင့်မှာသွားရောက်ဖတ်ပေးပါ.. ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားတာမို့လို့ နားလည်လွယ်ပါတယ်..
အဲဒီဆိုက်သုံးဆိုက်ရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ သက်ဆိုင်သူက တစ်ခုနဲ့ အဆင်မပြေရင်နောက်တစ်ခုနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ နောက်ထပ်ကောင်းနိုးရာရာဆိုက်လေးများသိတဲ့ သူများရှိရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးကြပါအုံးဗျာ..
Last edited by hellboy; 06-09-2010 at 06:55 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, ဆန်းမောင်, မှတ်ပုံတင်ရန်, ယွန်းယွန်း, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, ဖြိုးဇေ, နိုးတူး, arkaraung, bonge, KznT, phoetharlay, tu tu
ပို့စ် 64 ခုအတွက် 182 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အဆင်ပြေရင် Medifire ကနေ တင်ပေးပါ့လား
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Mandalarthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Mandalarthar
Originally Posted by မန္တလာသား
လင့်ခ်တွေကတော့ မပျက်ပါဘူး ကိုမန္တလာသားရေ.. ifile ပြဿနာရှိလို့နဲ့တူတယ်.. ကျနော်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ.. mediafire နဲ့ပါ..
mouse effect ထည့်နည်း
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, မှတ်ပုံတင်ရန်, ယွန်းယွန်း, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, arkaraung, bonge, KznT, Mandalarthar, nanda, phoetharlay
ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကိုတော့ ကျနော် ဗီဒီယိုဖိုင်လေး လုပ်ထားပါတယ်.. အခြေခံပေါ့..
အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးက ဒေါင်းထားလို့ ရလား။
ကျွန်တော် ကိုဖိုးထိန်ပြောတဲ့နည်းနဲ့ ဒေါင်းတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Mandalarthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, hellboy, KznT
ကိုမန္တလာသားရေ.. ကျနော့်ဖိုင်က ရိုးရိုး ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ IDM လိုမျိုးဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာရှိရင် တစ်ခါတည်း ဒေါင်းလို့ရပါတယ်..ကိုဖိုးထိန်ပြောတာက web ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ flash song တွေကို ဒေါင်းနည်းပါ ... ကျနော်လည်း အဲ့နေ့ကမေ့သွားတာဗျ.. တင်ပေးမလို့ပဲ.. အခုတော့ အကိုတောင်းလို့ တစ်ခါပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. နောက်အခန်းတွက်လည်း ကျနော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ.. အလုပ်ကနည်းနည်းမအားလို့ပါ..ပြီးတော့ တစ်ခါမှကိုယ်ကစပြီး ခေါင်းစဉ်အသစ်စဖူးတာမျိုးမရှိတော့ ပြင်ဆင်မှုအားနည်းတာလည်းပါပါတယ်.. အဲဒီအတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်.. အောက်မှာ အကိုအဆင်ပြေအောင် mediafire နဲ့ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန်, ယွန်းယွန်း, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, arkaraung, bonge, KznT, Mandalarthar, phoetharlay
ပို့စ် 57 ခုအတွက် 246 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကို hellboy ရဲ့ပိုစ့်လေးမှာပဲဝင်အားဖြည့်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ပါ... အခြေခံလေးပါပဲ
Last edited by သက်တန့်; 23-01-2011 at 05:07 PM.. Reason: pdf လေးပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ သက်တန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန်, arkaraung, bonge, hellboy, nanda, phoetharlay
Find More Posts by သက်တန့်
ကိုသက်တန့်ရေ ဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံး ကျနော်ဖွင့်တာ ဖွင့်လို့မရဘူး ဒီအတိုင်းပဲ..
sorry, we are unable to generateaview of the document at this time.
ဆိုပြီး ပေါ်နေတယ် ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်ကတော့ မကြည့်ရသေးဘူးဗျာ ဒီမှာပဲ ဖတ်မယ့်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင်ပါ.. ကျနော်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တာလားတော့ မသိပါဘူး.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ညီလေးတို့ လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့အဆင်ပြေမလားမသိဘူး ...
အကိုတော့ ဒီမှာ လေ့လာမိတာ ရှိတယ် ...
တော်တော် အဆင်ပြေတယ် ...
အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ ....
Credit - http://bawameeeain.co.cc
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ချစ်သားငယ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန်, မောင်သံသရာ, arkaraung, hellboy, phoetharlay
ဟုတ်တယ် ကိုhell boy ရေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲဒီ့တင်တဲ့နေကကျွန်တော်ကြည့်တာအဆင်ပြေတယ် ...ကျွန်တော်ကိုကေဇက်ကိုမေးထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို အခုတော့ ဒေါင်းပြီးတော့သာ reader လေးနဲ့သာဖတ်ကြည့်ပါလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲသိပ်မတင်တတ်သေးတာလဲပါမယ်ထင်တယ် ကိုကေဇက်ကြီးဆီကပြန်စာလာရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်... http://download885.mediafire.com/4ac...+flshsongs.pdf
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ သက်တန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန်, မောင်သံသရာ, arkaraung, hellboy
14-09-2010, 06:42 PM
အကို hellboy ရေ....
ကျွန်တော် အကိုပေးတဲ့ software နဲ့ Flash Song လုပ်ပြီးတော့
ပထမတော့ Ctrl + S နဲ့ပဲ swi ဖိုင်အဖြစ် Save တယ်။
နောက်ပြီးခါနီးတော့ swf ဖိုင်အနေနဲ့ ဖွင့်ကြည့်ချင်တာနဲ့။
File => Export => SWF (Ctrl + E) တွေ့တာနဲ့ Save တယ်။
ပြီးတော့ Flash Movie Player နဲ့ ဖွင့်ကြည့်တော့
အောက်ခံပုံရော စာသားရော အဖြူအမဲတွေနဲ့ပဲ ပေါ်တယ်။
ပိုဆိုးတာက စာသားတွေက ပြောင်းပြန်တွေ (မှန်စာလုံးပုံစံ) ပေါ်နေတယ်။
ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါဦးဗျာ ............
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Mandalarthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
14-09-2010, 08:06 PM
ိကိုမန္တလာသားရေ အောက်ကပလေယာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါ save တာကတော့ အကိုပြောသလိုပဲ လုပ်ရမှာပါ .. swf file ကိုရှာပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ .. အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောပါအုံးဗျာ. ကျနော်လည်း နောက်တစ်ပိုင်းတင်မယ်တင်မယ်နဲ့ အီနေတာ မလှည့်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, arkaraung, Mandalarthar
17-09-2010, 11:20 PM
Effect download လုပ်လို့ရတဲ့ site လေးတွေရှိ တင်ပေးပါလားဗျာ.......
swf file တွေကို Gom Player နဲ့ဖွင့်ရတာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ......
လိုချင်ရင်တော့ http://www.gomlab.com/eng/GMP_download.html မှာ download လုပ်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျ....
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Scorpion အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, arkaraung, hellboy, phoetharlay
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....။ ခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်...။ ကိုယ်ပိုင် သီချင်းလေးတွေ လုပ်ချင်တာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာ...။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မင်းတုန်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မင်းတုန်းမင်း
Mouse Effect ဆော့ဝဲက ဘယ်နားမှာလဲ ....ဆော့ဝဲ မလိုဘူးလား မတွေ့ လို့ ..
18-09-2010, 05:25 PM
ရှိတာလေး..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... http://mmflashsongs.ning.com/ ... ကနေဒေါင်းထားတာပါ...
မောင်သံသရာ, arkaraung, hellboy
18-09-2010, 05:50 PM
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ သူများ လုပ်ထားတာတွေကြည့်ပြီးအားကျနေတာ။ flash song ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ချင်တာ။ အခုလိုတင်ပြီး သင်ကြားပြသပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်နော်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ thitsarphyuwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by thitsarphyuwin
18-09-2010, 10:43 PM
ပြန်စာ -scropion အတွက် effect download လုပ်လို့ရမယ့်နေရာလေးƛ
ကို scorpion ရေ အောက်ကလင့်လေးမှာအကိုကြိုက်တဲ့
effect လေးတွေ preview ကြည့်ပြီးဒေါင်းလို့ရပါတယ်
အောက်မှာက component နဲ့ animation လေးတွေပါအသစ်တွေလဲပါပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ သက်တန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်မောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, arkaraung, bonge, hellboy, tu tu
25-09-2010, 10:17 PM
ဒီဖိုင်လေးကတော့ swishmax3နဲ့ mp3 resizer တို့အတွက် ခရက်နည်းလေးပါ.. ဆက်ရန်ကျန်သေးတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖြန်ကျမှတင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ.. အဲဒီအတွက်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါ.. လူလည်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောသလို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဂေါက်တောက်တောက်ဖြစ်နေတာ .. ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းကို မသိဘူး အဲဒီတော့ အရူး စိတ်ချမ်းသာရင် ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးလက်ကိုင်ထားပေးကြပါ မနက်ဖြန်တင်ဖို့အတွက်တော့ ပြင်ဆင်ပြီးသားပါ ဒါပေမယ့် ကျနော်လည်း အင်တာနက်က unlimit မဟုတ်တော့ အချိန်လေးစောင့်နေရလို့ပါ.. ပြီးတော့ အလုပ်လေးတွေကလည်း နည်းနည်းပေါ့
ကျနော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းသာလုပ်ပေးပါ အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါ. ပြီးတော့ ဒါက ကျနော့်ဆီ ပီအမ်ပို့ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော .. မေးရမှာမဝံ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော.. နောက်ပြီးခုမှဒီပို့စ်ကို စဖတ်မယ့်သူတွေအတွက်ရောပေါ့ တကယ်ဆိုကျနော်အစကတည်းက တင်ရမှာ. မမေးလောက်ဘူး အထင်နဲ့ မတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ. ဒါလေးလုပ်တတ်သွားရင် တခြား ဆော့ဖ်ဝဲအတော်များများကိုလည်း ခရက်လုပ်တတ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. တစ်ခါတည်းကြည့်ရအောင်ရော .. သိမ်းထားချင်တဲ့ သူများအတွက်ရော အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ...သိတဲ့ အကိုအစ်မတွေကတော့ မျက်လုံးသာစုံမှိတ်ထားကြပါတော့ဗျာ..
ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, သက်တန့်, ဧရာဝတီသားလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ဖြိုးယံလေး, arkaraung, bonge, KznT, mercury, phoetharlay, tu tu
ကိုဟဲကသူ့os နဲ့ swish နဲ့အဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တာပါ။
effect change နည်းလေးပါ ...
ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ နဂိုလုပ်နေကျအတိုင်းဖွင့်မယ်သီချင်းထည့်မယ်၊ပြီးရင်စာတန်းထိုးမယ် effect လေးတွေကိုထည့်မယ် ...အဲမှာသူ့နဂိုရှိရင်းစွဲ effect လေးတွေကိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပုံလေးပါအောက်မှာကြည့်ပါ
components ထဲက 3D effect ထဲက3D slide လေးကို mouse လေးနဲ့စွဲထည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင်လိုအပ်သလို ကိုယ်ရဲ့ movie frame နဲ့ကိုက်အောင်ညှိလိုက်ပါ
ကိုယ့်စက်ထဲက ico or png လေးတွေကို insert image လုပ်ပေးလိုက်ပါအောက်ကပုံလေးကလိုပေါ့
ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ movie size နဲ့ ပုံရဲ့ဆိုဒ်လေးကိုချိန်ထားပေးပါ ဆိုဒ်ကြီးရင်သိပ်ကြည့်လို့မကောင်းလို့ပါ
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ outline ဆိုတဲ့ tap လေးကို click ပေးပြီး အောက်က +sign လေးတွေကိုကလစ်ပေးပြီးဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် အဲဒိ့မှာ shape အောက်ကဟာလေးတွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ
အပေါ်က ကျွန်တော်တို့ခုနကထည့်ထားတဲ့png or ico လေးရဲ့ shape လေးကို copy လုပ်ပြီးအောက်က shape ပေါ်မှာကလစ်ပေးပြီး paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ
(scence အောက်က rose heart.png ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါ)
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ preview လေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါ rose heart လေးတွေ မျောနေတာက်ိုတွေ့ရမှာပါ
effect လေးတွေchange ပြီးလှလှပပဖြစ်ကျပါစေ............
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ သက်တန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကွက်တိ, ယွန်းယွန်း, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မြင့်မိုရ်, bonge, hellboy, kyaukphyu, KznT, tu tu
တစ်ခုလောက် ၀င်မေးကြည့်မယ်နော်.. ခုမှ လုပ်ကြည့်နေတုန်းဆိုတော့ ပြဿနာက များသား..
လောလောဆယ်တော့ ပြဿနာက လုပ်တုန်းကတော့ အကုန်အကောင်း.. save တော့မှ
exe ဖိုင်မှာရော. swf ဖိုင်မှာရော နှစ်ဖိုင်လုံး blackandwhite ကြီးနဲ့ ထွက်လာတယ်..
ပြီးတော့... လုပ်တုန်းက စာသားထည့်တာ အမှန်ပဲ.. ပြန်ကြည့်တော့လဲ အကောင်း
save လိုက်တော့မှာ ဇောက်ထိုးတွေပါ ထွက်လာတာ.. ဟီးး.. အဲ့လိုတော်တာ..
အဲ့ဒါဘာလို့လဲသိဘူးဗျ.. သိတဲ့သူများ ကယ်ကြပါဦး... :)
Last edited by ဒဿဂီရိ; 07-10-2010 at 04:25 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဒဿဂီရိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အကိုလုပ်တာ win7မှာထင်တယ်
သူ့ Patch က win7နဲ့မကိုက်ဘူးထင်တယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ သက်တန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, မောင်သံသရာ, hellboy
ပို့စ် 56 ခုအတွက် 269 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုကြီး ဒဿ Save As န့ လုပ်ကြည့်ပါလား ... သူ က swf နဲ့ တစ်ခါ swi နဲ့ တစ်ခါ သိမ်းခိုင်းတယ် ...
swf က အလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ ကို ပြီး သလောက် ကြည့်လို့ ရတယ် ... swi က တော့ ဆော့ဝဲ သတ်သတ် ပေါ့ ..
အမှား ၇ှိရင် လဲ ခွင့်လွတ်စေချင်ပါသသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်ကီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မောင်ကီး
အွန် ... ဒါဆိုလဲ ကိုက်မယ့်ဟာလေး. ပေးကြပါဗျာ...
နီတို့နှစ်ယောက်နော်. စတုန်းက စထားပြီး..
သားကို ဒီတိုင်းပစ်မထားနဲ့... မရလို့ကတော့
ပွဲကြမ်းပီပဲ ... ဒန်တန်တန်...
ဒါနဲ့ တင် ဒီနေ့ တစ်နေကုန်သွားတယ် ... ငိုချင်လယ်... :(
ကိုမောင်ကီး ပြောသလို လုပ်တာလဲရဘူး.. ဟီးး.... :)
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဒဿဂီရိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါရစေ ကိုဒဿဂီရိရေ..
ကျနော်မနေ့ကတည်းက အကိုမေးထားတာကို တွေ့ပါတယ်. ဒါပေမယ့် အားလည်းနာ မျက်နှာလည်း ပူလို့ မဖြေဖြစ်ခဲ့တာပါ.. ဖြစ်ပုံက ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုမျိုးကြုံနေရလို့ဗျာ. ဒီပို့စ်လေးစပြီး သိပ်မကြာဘူး ကိုမန္တသားဆိုတဲ့ အကိုတစ်ယောက်ကလည်း စာတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျနော်အဲ့တုန်းက သုံးတာ windows vista ပါ.. အဲဒီတုန်းက ကိုယ့်ဆီမှာက အိုကေနေတယ်ဆိုတော့ သူမေးတာကို ပေါ့ပေါ့လေးပဲတွေးမိတာပါ. တစ်ခုခု မှားလုပ်တာနေမှာပဲပေါ့. ပြောတော့မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.
ဒီကြားထဲလည်း အဆက်ပြတ်နေတာကြာပါပြီ ဟိုတစ်ရက်ကမှ ခရက်ပုံလေး ပြန်တင်ဖြစ်တာ. နောက်ရက် effect တွေအကြောင်းလည်း တင်မယ်လည်းလုပ်ရော တနေကုန်သွားတယ် စာလုံးတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်တာ ဘယ်လိုမှကို မပြောင်းဘူး အမျိုးမျိုးစမ်းတယ် ၀င်းကြေးမုံလိုမျိုးဖောင့်နဲ့ရေးတယ် မရဘူး စာလုံးကို rotation ပြောင်းရေးတယ် မရဘူး. အဲဒါနဲ့ပဲ လက်လျှော့ပြီး ကိုသက်တန့်ကို အကူအညီတောင်းလိုက်ရတယ်.
နောက်နေ့ ကိုကေဇက်ပြောပြလို့ window7နဲ့ ကိုက်လားမကိုက်လား စမ်းသေးတယ် .. အဲ့မှာတော့ အိုကေတယ်. ဒါပေမယ့် ခုနကပြောတဲ့ ဟာကတော့ ဘယ်လိုမှကို မပြောင်းဘူး. အခုဖြစ်နေတာတွေက ကျနော့်ဝင်းဒိုး ပြောင်းသုံးပြီးမှဖြစ်လာတာ .. ပို့စ်တင်မယ်ဆိုပြီး အရင်ဝင်းဒိုးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ project file တွေအကုန်လုံး ပြောင်းပြန်ကြီးပဲ. အဲဒါနဲ့ပဲ လက်လျှော့ထားလိုက်ရတော့တယ် . ကိုဒဿဂီရိရေ.
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ကျနော်လည်း mmflash က ကိုထွန်းထွန်းဆီကိုတော့ မေးလ်ပို့ထားပါတယ်. အကြောင်းမပြန်သေးလို့ပါ.နောက်တစ်ခုက အစ်ကို့ဆီ windows7ထက်နိမ့်တဲ့ ၀င်းဒိုးများရှိရင် ပြောင်းသုံးကြည့်ပေးပါလို့. နောက်ပြီး ကိုသက်တန့် ပြောလို့ patch ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် စဉ်းစားမိလို့ ကျနော်လည်း latest patch လေးကို ရှာနေပါတယ်. အခုတော့ အဲဒီ error လေးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ error များရှိရင် ပြောပါဗျာ ကျနော်အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပါ့မယ် black and white ပေါ်တာကတော့ သူ့ဆီမှာပါပြီးသား flash player နဲ့မဖွင့်ပါနဲ့ save ပြီးသား swf file ကိုမှ အပေါ်မှာ ကျနော်ကိုမန္တလာသားကို တင်ပေးထားတဲ့ ပလေယာလေးနဲ့ ဖွင့်ကြည့်ပေးပါ.
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, မောင်သံသရာ, KznT, Mandalarthar
ကို ဒဿရေ swish max2က ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ ဟာလေး ပါ ... အဆင်ပြေရင် သုံးကြည့်လိုက်ပါ ..
ကျွန်တော်လဲ myanmarflashsongs ကလား bawameeain ကလားမသိဘူး ဒေါင်းထားတာ
window7မှာ swish max2က ပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျ ...
ဒါက Ebook ပါ
ဒါက swish max2ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မောင်ကီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, မောင်သံသရာ, hellboy, Mandalarthar
ကိုမောင်ကီး ညီလေး hellboy နဲ့ ညီလေး သက်တန့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
swishmax2 နဲ့က အိုကေတယ်ဗျ. swishmax3 ညီလေး သက်တန့်ပြောသလို
path ကြောင့်ပဲထင်တယ်.. အခု ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသစ်ရှာပြီး ပြန်ရမ်းသုံးကြည့်တာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဒဿဂီရိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်တန့်, မောင်ကီး, hellboy
ညီလေး hellboy ပေးထားတဲ့. mouse effect လေးတွေပါ .
တစ်ခြားလိုချင်တဲ့သူတွေလဲ ဒေါင်းလို့ရအောင် ညီလေး hellboy
မအားလို့ ကျွန်တော်ပဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
software ebooks, software guide, software howto, software knowledge
အခြေခံ flash tutorial များ moe z ဆွေးနွေးချက်မျာ6း02-05-2012 08:02 PM
Hacking With USB Flash Drive ဘိုးတော် Software များဆိုင်ရာ 14 27-11-2010 04:25 PM
Window xp Extra small USB flash Edition cherry Windows XP404-12-2009 02:14 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 04:38 PM